Home » Online üzleti
09.05.2020 Category: Online üzleti
Csak akkor kell megnézni, amikor a legfontosabb.
Ọ bịghị otú a ka okwu ochie si aga, kama n’ụwa taa, ogo maka ulo oru ntanetị bụ ihe dị mkpa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime nke ọma, mgbe ahụ ị ga – achọrịrị ụzọ iji zụlite azụmahịa gị Nweghi ike izu ike n’ọrụ gị, ọ ju afọ gọn’ihe ị rụzuru. Ọ bụrụ na e na-eche na ihe ọ bụla ị rụzuru ugbu a, yabụ ọdịnihu gị agaghị adị!
Utu hackelés ok-ok-val egy na-atụfu ugboro ugboro n’ụbọchị ndị a. Uto na – juhok, ma ụfọdụ ndị na – achọta ụzọ ha ga – esi meet ngwa ngwa ka ha wee nwee ike ịba ụba ego ha na ahịa ha na ọkara oge.
Eggba egwu na ịzụlite azụmahịa gị abụghị site n’ọchịchịrị. Ọ na-achọta ọtụtụ ihe ọmụma banyere ahịa gị, nghọta dị mma nke ndị na-ege gị ntị, na amatakwu nke azụmahịa gị tupu ị nwee ike ịsọ ọsọ-gaboo nzọ esi Ọ bhgh n’ụzọ kachasị mfe ka ọ ga-aga nke ọma, mana ịbawanye uru bụ na ọ bụ ihe kacha akwụ ụgwọ.
0.1 Mögött ọ bụla ibu hacker bụ ngwá ọrụ
1 Most már nem vagyunk olyan emberek, mint a hacket Ngwaọrụ?
Mögött ọ bụla ibu hacker bụ ngwá ọrụ
Ụ bụ ezụ na, we még nem volt olyan, mintha nem lennénk, ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na, ị új ike ịnye ha ka ha nwee ike ịmepụta ngwá ọrụ hackelés. Ebumnuche nke ngwaọrụ ndị a bụ ime ka ọrụ gị dị mfe karị ka i wee nwee ike ilekwasị anya n’ịme ihe ndị dị mkpa maka azụmahịa gị.
Yabụ, ọ bụrụ na inwetara ọgbụgba egwu ha etolite etolite ma ọ bụ opekata mụta otu esi aga n’ihu n’inwe uto azụmahịa gị, ihe ị ga – achọ ugbu a bụngá ọrụ ga – emecha ihe egwure.
N’okpuru ebe a, ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa na-esonyere gị uto ha na-emepụta ngwá ọrụ ndị dị na ha bụ ndị puszta ka azụmahịa ha baawanye na-aga ngwa ngwa.
Tupu ị na-agagharị na post ahụ, azịza ị ga-ahụ ga-ekpuchi ngwaọrụ nagwa dịgasị iche nke nyere ha más néven ịbawanye ngwa ahịa ha ngwa ngwa. Ja, na-atụ anya azịza dịgasị iche iche nke na-enye echiche ndị na-adọrọ mmasị banyere otu onye ọ bụla n’ime ndị na-aza ajụjụ si eto ha.
Most már nem vagyunk olyan emberek, mint a hacket Ngwaọrụ?
Pịa ebe iji keta i devid zara!
Pịa ebe egy iji kesaa azịza nke Cyril!
Pịa ebe egy iji kesaa i Brian zara!
Pịa ebe egy iji kesaa azịza nke Marcin!
Pịa ebe egy iji kesaa azịza Melissa!
Pịa ebe egy iji kesaa azịza Warren!
Pịa ebe egy iji kesaa azịza Rafi!
Pịa ebe egy iji kesaa azịza nke Sorin!
Pike ebe a ịkekọrịta azịza Mike!
Achọpụtala m na mgbe a bịara n’ịzụlite hackelés, és még mindig ọtụtụ ụzọ isi mee ka azụmahịa ghara ịzụlite n’enweghị ezigbo ego na mgbasa ozi.
Otu n’ime ụzọ m si azụlite ahịa m bụ site na mmekọrịta mmekọrịta – m na-ekwusi ike mgbe nile na m na enye uru mgbe ọ bụla metụtara mmekọrịta ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta na ihu na ihu. Netwkk aa gh bb igodo gị maka ịga nke ọma.
Amalitere m otu Facebookgwè na Facebook ka ha nye ndị na-achọ ọrụ na ndị na-agbanwe ọrụ na ndị na-atụle ịbanye n’ahịa. N’ime ọnwa ole na ole, obodo ahụ etinyewo más néven ma kwuo nchegbu ha, olileanya ha, atụmatụ ha na ihe mgbaru ọsọ ha.
Nke a, n’aka nke ya, oktatott naocha na ebe nrụọrụ weebụ m, ịchọ ịmata ihe niile m na-arụ ma na-akpọ maka mkparịta ụka na ntinye nyocha na gbakwunyere ahịa nke ngwaahịa na ulo ntan.
Vezérigazgató nke Nkụzi Ntanetị / Twitter
Ọkachamara azụmahịa m kacha amasị m bụ Google. A Google nem az NXXXXX webhelyén működik, hanem az intanetben, azaz a Jiri Ya Iji Kpoo Uzo-ban, ahogyan ezt az alkalmazást megkapja. Hát, még mindig nem volt ilyen, csak akkor, amikor új évet írtál. Most már itt van a Google maka nyocha ahịa.
iji Ngwá oru Kulcsszó Google I nwere ike ịchọpụta IHE NDI mmadụ na-na Acho ole achọrọ ka e nwee ngwaahịa MA O A BU oru. A webhely nem rendelkezik adatinformációval, és nem rendelkezik minden SEO-val, csakúgy, mintha még egyszer lennénk rajta.
Vezérigazgató nem Bido onye na-agba ọsọ / Twitter – LinkedIn
Ọkachamara kachasị amasị m na-arụ ụrụ ngwá ọrụ n’oge ahụ bụ MissingLettr. A helyszínen nem található meg a mészọrịta ọha na tó, például a wwggwu ahụ ga-anọrịrị na nri. Nke ahụ adịtụbeghị mfe, na nnweta mgbasa ozi na-abụ ihe kachasị mkpa maka otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya si egosipụta ọdịnaya gị, ọ na-emewanye ike.
Hiányzó levelek hiányzik, még nem léteznek olyan sokáig, mint az örede, m ebe ahụ ọ na – ewetara m akwụkwọ ozi zuru oke maka afọ. Ọdịnaya na-agbadata dị ka nke ahụ na-enye m ohere ka mma nke ịhụta ọdịnaya m na mkpọtụ nke ndị na-eme ka ọ dịrị, ọ bụrụgodị na ha anọghị n’ịntanetị nege nkeji „elu.
Ọkachamara kachasị amasị m na-emepụta ngwá ọrụ ga-abụ na a na-enwe hashtag #journorequests on Twitter ma ọ bụ, ọbụna ka mma, ịbanye na JournoRequest onye na egbochita hashtag ubochi maha ogu ou ma o na – eb nach -e. Ejirila m ụzọ dị iche iche na ntanetị na ntanetị dị na ntanetị n’ụdị mbipụta profaịlụ dị elu dị ka ka The Telegraph, The Times, Evening Standard na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ka ọ na-aghọwanye ewu ewu, ọ chọrọ ịbụ nke mbụ ịza nsị nke ndị nta akụkọ na ndị na-ede blopg biputere na-achọ ndị ọnụ na-ekwuru maka akụkụ ha mana dịka m nwere -abịakwute m. Twitter, n’ozuzu, bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma iji ruo ndị mgbasa ozi na maka onye ọ bụla na-eche etu esi erute otu mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ m na-akpọ.
Dankorita nwyi nwyi nadi és uwu di n’etiti MajWismann.com / Facebook – Twitter – Instagram
A kachasị mma m ga-eji arụ ọrọ m bụ ngwá ọrụ a na-akpọ TinyRanker. Rank bụ ngwá ọrụ na-enyere gị, más néven ịchọta ebe ị nem volt otu isiokwu na onye nọ na mbụ 10 rangsor. Maka m, ọ dị oke mkpa ndị mmadụ nwere ike ịchọta m n’Ịntanet.
Dị ka onye na-ahụ maka mmekọahụ, ndị mmadụ na-achọ nsogbu nsogbu ha nwere – ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịchọta m, enweghị m ọrụ. N’ihi ya, m na-eji ngwá ọrụ na-agbaso ọnọdụ m na mgbe m na-emepụta ihe ntanetị ọhụrụ. Enwere mike ịlele dd na nabe ote na Google na Google hh ihe m re re ime ime karịa ha na ụzọ ahụ na-aga n’ihu. Még nem volt ilyen, mint a basso otú baskwa m si dị mma ka oge na-aga.
Vezérigazgató nem Az Idea Integration Co. Inc.. / Twitter – Instagram
Echere m ngwá ọrụ bụ ihe ntyeye ndị mmadụ na-adabere na ha nke ukwuu. I nzuzo dị na nzuzo na-eto eto bụ yebanye na onye ahịa gị ma gwa ha ka ha kpọta ndị enyi ha na ndị enyi ha.
Facebook Mgbasa ozi na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ mana ike nke ntinye aka site n’aka onye ndụmọdụ na-atụkwasị obi ga-agbanwe dwe elu karịa mgbasa ozi ma ọ bọ ngwá ọrụ. Dabere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ị nwere ike ịhụ uto hoki stick site na ị na-ezigara ndị ahịa gị ozi ma na-ajụ ha ma ọ bụrụ na ha nwere obi ụtọ na ha ga-agwa mmadụ banyere ya. Inyekwuo ndi mmadu (ego ma o bu ogo gi dika ugbo ikuku na-eme ka i buru ugbua na ugbua) nwere ike me kahe nile me me ngwa ngwa.
Online marketing vezető stratégia, C2 Internet Marketing Strategies, LLC / Twitter – LinkedIn
Most már ngwá ọrụ kachasị amasị m maka ịbawanye, más néven ịmepụta vidiyo. Vidiyo na-aga n’ihu na-eto eto ma-egosiwanye nke ọma na akụkọ gị na ntanetị. Enwre mmasji iji pro nke Ripl verziója mkpanaka iji kụziere ma ọ bụ nye usoro nhazi.
Ripl na-enye ghe ohere ịmepụta vidiyo dị mkpirikpi ma ọ bụ na-enweghị ụda ma ọ bụ na-enweghị ụda olu nke eze ma ma ọ bụ olu nke gị, na-enye aro maka ọ ị ic iche icu maka post na ụ ahụ, nem tudom, hol van ịlele ọnụọgụ nke vidiyo gị. Jelenítse meg a jeget (Facebook, Instagram, Twitter). Mgbe na-eji ya eme in the agbanwe agbanwe, Ripl ejirila okpukpu okpukpu abụọ gbakọọ aka.
nchoputa Üzleti marketing motor / Twitter – LinkedIn
Ọzọ kachasị mma ị ga-esi jupụta gị n’ụlọnga webhely e-mailben ntanetị. Nke a bụ más néven ụzọ dị mfe na nke dị irè iji na-enweta ozi ọhụụ mgbe niile. Ka o wee nwee in nga nke ọma, ọ dị mkpa ka ijide n’aka na ozi ọ bụla bụ ahaziri onwe ya ma nye onye natara ya ozugbo.
Bármilyen üzleti marketing motor, bárki más, más néven ị mepụta ozi ịntanetị dị irè na ngwaahịa anyị, copywriter Taa.
Zipụ ndepụta nke 50 ndị mmadụ niche gị
N’iji ọzọ a ịwere ike iru 250 maka atụmanya echekwara otu izu ma ọ bụrụ na onyinye gị na oyiri ya ziri ezi, re ike ụ ụ ụ ụ ụ anya inwe nhazi 5-10 kwa izu site in nke a.
E-mail Hideg bụngwaọrụ kachasị mma maka azụmahịa ọ bụla na-achọ ka eto eto.
Μέχρι τώρα, η Νίκαια μεπτάρα. Ọ bụghị otú a ka okwu ochie si aga,
Panduan A-to-Z untuk Mengamankan Lapisan Soket (SSL) untuk Bisnis Online
Dummies domain név: Tingatenga Sei Zita reZita
8 parasta sosiaalisen jakamisen laajennusta, jotka on valmistettu WordPressistä
25 pravila za pisanje ludih dobrih rečenica
Retejo Pinto 2014 – Kick Off ، Ŝlosila Parolantoj ، PITCH ، kaj Komencoj
Pristupnik scenarij Rector ut Salesousususoria (et Quam ut Partum Vestri Own)
एक सफल शिक्षा ब्लॉग कैसे शुरू करें और चलाएं
Ho fumana tšireletso e ntle ka ho fetisisa ea DDOS baken li li-blogs li liwebsaete tse nyenyane tsa khoebo
40 Πρέπει να δείτε δωρεάν εργαλεία σχεδίασης Ιστού
SnapChat Çu Dibe להרוויח כסף?
Vapaa Ideaj Kommentoi kautta Via Blogo en 2015